Namibia : Fahasamihafan'ny versiona roa - Wikipedia
Namibia : Fahasamihafan'ny versiona roa
Endrik'io pejy io tamin'ny 11 Janoary 2020 à 11:17
67 octets ajoutés , il y a 9 mois
Endrik'io pejy io tamin'ny 16 Mey 2014 à 08:49 (hanova)
k (The file Image:Coat_of_Arms_of_Namibia.svg has been replaced by Image:Coat_of_arms_of_Namibia.svg by administrator commons:User:Ymblanter: ''File renamed: File renaming criterion #6: Harmoniz...)
Endrik'io pejy io tamin'ny 11 Janoary 2020 à 11:17 (hanova) (esory)
I '''Namibia''' na '''Repoblikan'i Namidia''' (amin'ny fiteny anglisy ''Namibia'' ary ''Republic ofdia Namibia'',firenena amin'ny fiteny alemana ''Namibia'' ary ''Republik Namibia'', aryao amin'ny fiteny afrikaans ''Namibië'' ary ''Republiek van Namibië'') dia firenena ao[[faritra atsimon'i Afrika]]. Ny [[faritany]]faritra misy an'i Namibia ankehitriny dia nitondra ny anarana ''Afrika Atsimo Andrefana afrikana'', zanatany alemanaalemàna, ary taty aoriana protectorat anprotektoratan'i [[Afrika Atsimo]]. Firenena mahaleotena i Namibia hatry ny tamin'ny 21 Martsa 1990. Ny firenena mamaritra azy dia i Angola[[Angôla]] any avaratra, ny Repoblikan'i Afrika Atsimo any atsimony, nyi Botswana[[Bôtsoana]] any atsinanay ary ny Zimbabwe[[Zimbaboe]] ary i [[Zambia]] any avaratra andrefany.
Atao hoe ''Namibia'' na ''Republic of Namibia'' izy amin'ny [[fiteny anglisy]], ''Namibia'' na ''Republik Namibia'' amin'ny [[fiteny alemàna]] ary ''Namibië'' na ''Republiek van Namibië'' amin'ny [[fiteny afrikansa]].
Ny renivohiny dia Windhoek, renivohitry ny zanatany alemana an'i Atsimo andrefana afrikanina taloha. Ny dikan'i ''Windhoek'' amin'ny fiteny afrikaans dia 'toerana tsofon'ny rivotra'. Telo hetsy eo ho eo ny isam-ponina any Windhoek, izany hoe eo amin'ny folo isan-jaton'ny isam-ponina manontolo eo ho eo (roa tapitrisa mponina). ▼
▲Ny renivohiny dia Windhoek, renivohitry ny zanatany alemanaalemàna antamin'ny faritr'i AtsimoAfrika andrefanaAtsimo afrikaninaAndrefana taloha. Ny dikan'iny teny hoe ''Windhoek'' amin'ny fiteny afrikaansafrikansa dia '"toerana tsofontsofin'ny rivotra'". Telo hetsy eo ho eo ny isamisa-poninamponina any Windhoek, izany hoe eo amin'ny folo isan-jaton'ny isamisa-poninamponina manontolo eo ho eo (roa tapitrisa mponina).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/979427"